Shiinaha Twin fur Foosto adag oo warshad la'aan ah iyo soosaarayaasha | Nanjing Zhitian
304/316 / 316L Bir Daxal ah
Xidho iska caabinta ayaan ahayn mid sare, oo ku habboon si fudud oo loo xoqdo qalabka.
mataano fuusto foostolaba qaybood fur mashiinka extruder
Waxaan ku qancin karnaa baahiyahaaga kala duwan:
Marka loo eego qaabka muuqaalka,Foosto xiran, Foosto Quudiyaha, Foosto Side Foosto, Fuusto Venting, Foosto Combi.
Sida laga soo xigtay safka,Iyada oo foostada safka ah, Iyadoo aan lahayn foosto liner ah.
Adoo adeegsanaya fahamka macaamiisha, kugula tali waxyaabaha ugu qiimaha badan.
Ka shaqeynta Astaamaha iyo Faa'iidooyinka
1. Dhammaan agabyada ka kooban qaybaha waxaa bixiya noocyada safka hore ee gudaha ama kuwa mataanaha ah ee yurubiyaanka mataanaha saxaafadda, iyo falanqaynta aasaasiga ah waxaa loo sameeyaa si loo hubiyo in alaabada ceyri ay run tahay
2. Kooxda xirfadleyda ah ee R&D kaliya ma bixin karaan oo keliya naqshadeynta naqshadeynta muunadda waqtigeeda oo saxan, laakiin sidoo kale waxay bixin kartaa adeegyo farsamo oo isugu jira qaybaha;
3. Iyadoo aan loo eegin hadday tahay martigeliyaha sumadda koowaad iyo kan gudahaba, shisheeyaha, shirkaddu waxay haysaa macluumaad farsamo oo faahfaahsan iyo qalab gaar ah, oo si dhakhso leh u bixin kara adeegga dayactirka;
4. Nidaam maamul casri ah oo hagaagsan, kormeerka guud ee cabbir kasta oo shey kasta ah wuxuu hubinayaa inaad hesho 100% alaab tayo leh, iyo tayada qayb kasta oo lasocota inta hawsha socoto oo dhan.
Shaxda Tilmaamaha Foosto
Ballaca Godka / Φ (MM)
Fogaanta Xarunta / D (MM)
Marka loo eego dalabkaaga, Customing workblank, wuxuu qaataa maaddooyinka ceyriin ee safka koowaad safka koowaad.
Noocyo badan oo qalabka wax soo saarka horumarsan, qaabka kanaalka godka gudaha ee farsamaynta qalafsan ee peocessing. Si aad u buuxiso codsigaaga.
Isku day meertada biyaha, ka dib markaad tijaabiso nidaamka shaqo kasta. Sax sare, adiga kaliya.
Qalabka tijaabada-dhamaadka sare iyo qalabka, kormeerka, masaafada xarunta imtixaanka, cabirka muuqaalka, daloolka, iwm. Warqad ay soo saartay warbixinta kormeerka tayada ee kormeerkaaga.
Xirxirida dhoofinta caadiga ah Si loo soo saaro wax soo saarka antirust, ka dibna u isticmaal baakadda warqadda ah, xumbada, ee lagu hagaajiyay kiiska alwaax, ka dib marka la xaqiijiyo keenista.
Dhamaan ZT waxay fiiro gaar ah u leeyihiin talaabo kasta oo faahfaahinta ah, Waxaan rajeyneynaa foojarka horay u wada socda adiga iyo adiga!
Hore: Mashiinka mataanaha iyo foostada tooska ah ee foosto la'aan
Xiga: Ku marooji Foosto Cusboonaysiinta Old beddelista Beddelka Cusub A101 Liner / Khadadka Guud ee Twin Screw Extruder Parts
Baarka Loogu Tala Galay Mataanaha Ku Tilmaame
Isbarbar dhig Mataanaha foosto
Isbarbar dhig Mataano Foosto
Ku marooji Bareello Loogu Tala Galay Mataanaha Furitaanka
Mataanaha Isbarbardhigaya Foosto
Mataanaha Ku marooji Extruder Foosto
Xidho High Cunto Extruder Qaybo dayactir O ...
Qaybta Wareejinta Tex65aii, Fur Foosto Wixii Extruding, Caaga Extruder Ku marooji Foosto, Baarka Loogu Tala Galay Mataanaha Ku Tilmaame, WR15E usheeda dhexe, Extruder Double-Ku marooji,